Indlela yokufakela iipolisi zokuhamba kwi-Backpack yakho
Izibonda zezintaba ziza kulungelelanisa izinto ezininzi, ezifana nokuwela imilambo , ukuphonononga ubunzulu bomdaka, kunye nokuhambisa umbhobho obomvu ngaphandle kwendlela. Abanye abantu bafunga ngabo ngokuncedisa inkxaso kunye nokulinganisela ubunzima bepakethe enkulu, kwaye bancedo oluxabisekileyo xa kwenzeka ukuba uwele ngexesha lokukrazula. Kodwa ezo zibonda ziba ngumthwalo xa ungazisebenzisi.
Ukuba uthetha izibonda zesikhala esidala okanye naluphi na uhlobo lwesigxobo sokuhamba esingahla phantsi kwisiguqu esilawulekayo, unyanzelekile ukuwafaka ezandleni zakho zonke iindawo zokunyuka. Kodwa ukuba izibonda zakho zokunyuka zihlobo oluhlelekayo olubonisa i-telescopes ukuya kwixesha elilawulayo unokuzifaka okanye kwi-backpack yakho, ukushiya izandla zakho mahhala kulo lonke uhambo.
Uninzi lwamagqabi aphethe izikhonkwane ezixhasayo zokubamba ipolkking. Bona indlela yokufakela iipali zakho zokunyuka kwi-backpack yakho ngendlela eqhelekileyo. Ngaphezulu, qwalasela amalungiselelo ambalwa xa kwenzeka iphakethe lakho lingenayo ikhonkco.
Iimpawu ezintle ezikuthi, endaweni ethile kwi- backpack yakho, unendawo yokuxhumeka kwipolisi enje. Abanye, njengaleyo ubona apha, bavaliwe ukuvala okanye u-cinch oqinile. Mkhulule i-cinch yonke indlela uze uhobise ukuhamba kwepolisi yakho, ukhangele phezulu kwipakethi yakho.
Iipakethi ezimbalwa zineenkcukacha ezihambayo ezivulekileyo ezivulekileyo kwaye zivale yonke indlela, kunye nekhonkco elincinci elibambe livaliwe. Ukuba unalolu hlobo lwesinamathiselo nje ungayifaki i-fastener ukuze uyivule, yibeka ipolisi yokuhamba ngokuhamba (ukusingatha ukukhomba phezulu kwipakethi) kwaye uvale ukukhawuleza ejikelezweni sakho.
Gcina ingongoma yesigxobo se-trekking ngelophu ekhoneni eliphantsi lepakethi yakho. Ibhasikidi yepolisi iya kukugcina ingawa.
Cindezela iphuzu lepolisi kwizantsi yepakethi yakho ukuze uqiniseke ukuba uhlala phantsi kuloo ndawo.
Ukumisela phantsi i-cinch point malunga nomzimba wesibonda ukuwubeka endaweni, kwaye ulungile ukuhamba.
Namathisela esinye isibonda kwipakethi, kwaye ulungele ukuhamba ngezandla.
Kodwa kuthekani ukuba awunayo ikhonkco yokubambisa ipolisi njengale? Makhe sijonge amanye amalungiselelo athile.
I-Pocket Trick yoKhusela iiPolisi zamaHlathi
Ukuba i- backpack yakho ayinayo i-cinch point kunye ne-bottom loop yokubamba izibonda ze-hiking endaweni, kodwa ine-pocket side kunye ne-side compression straps, unenhlanhla. Yenza nje umgca wesiphelo sesiphelo sesibonda phantsi kwipokothini, uze uqine i-strap straps emzimbeni weebonda kunye ne-cinch them tight.
Ukukhusela iiPolisi zakho zeTrkking ngeCompression Straps kuphela
Ukuba ipakethi yakho ayinayo iipokotshi zecala kodwa ingenayo i-straps compression, unakho ukhetho lokugcina izibonda zakho zokuhamba. Ezi ntambo zingabikho naphakathi kwipakethi; akudingeki ukuba abe macala. Ngamanye amaxesha iipakethi zinemimandla yokuba udibanise iingubo zakho zoxinzelelo kumaphuzu ahlukeneyo, ngoko jonga abo nabo.
Khulisa izibambo, udlulise izibonda ngazo (uphatha phantsi, iibhasiki ezikhomba) kwaye uqinqa iimbambo ezijikeleze izibonda zakho. Iibhasikiti zeepaliti ziya kubagcina zingangeni.
Kucacile ukuba oku kusebenza kuphela ukuba izibonda zakho ziphethe iibhasiki. Kwezinye iimeko, izibonda zazingabikho iibhasikiti, okanye wazikhupha kwaye akazange uzizise kunye nawe ekuphumeni kwakho.
Ukuba ipakethi yakho ayinayo i-straps straps, khangela iipatches ezinezinto ezimbini okanye ngaphezulu. Zilapho unokuzongeza zakho izithintelo zokuncintisana. Kule meko, ungathenga ii-straps zoxinzelelo ukuze ungeze kwipakethi yakho okanye intambo ye-webbing, cordage, kwezinye izibophelelo ngokusebenzisa izibonda zokusebenzisa njengeengcambu zokubamba izibonda zakho.
Ukuba ipakethi yakho ayinayo ikhonkco yokubambisa ipolisi ekhethekileyo, iipokotshi zecala okanye i- straps straps, kusekho lula, ukuba isisombululo esilula. Vele ubeke izibonda ngaphesheya kwepakethi yakho uze uziqhumise.
Oku kusebenza malunga nokunye okukhethwa kukho ipakethe enkulu. Beka izibonda ngaphaya kwegumbi elikhulu, vala phezulu kwepakethe phezu kwazo, kwaye uyibeke endaweni yayo. Akusiyo isisombululo esipheleleyo kuba ngoku unalo i-crossbar encane (enye ekupheleni kwayo). Kodwa ukuba uhamba ngeendawo ezivulekile, kusekhona okunye okuthandekayo kwizibonda zokuhamba ngezandla xa ungazifuni ngokwenene.
Ukuba ipakethi yakho ayinaso phezulu ungakhonkca okanye ubuncinci i-straps ngasentla, enye enye indlela ukhetha ngayo ukubetha izibonda emzimbeni wepakethi, izikhombisi ezikhomba phantsi, amaphuzu ekhupha ngaphandle kwepakethi yepakethi. Shift zombini izibonda yonke indlela eya kwelinye icala, faka ipakethe ivaliwe ukusuka ekupheleni, kwaye uzame ukukhumbula ukuba ungabikho ukugqithisa iliso lakho lomntu xa ujika ngokukhawuleza.
Izinto Ezifanele Uyenze Ngaphambi Kokuthatha I-SAT
Iseluleko seTrans Teachers - Imisebenzi yokuFunda
Ukusebenza kweeTires zeFate Ford Mustang
Iingoma ezili-10 eziphezulu zeR Rock ngokufa
Amanqaku angaphezu kwe-100 aBafazi abalulekileyo kwiMbali Yehlabathi
I-Mango Cheison? Urushiol Ubangela I-Dermatitis
I-SAT Amanqaku okuthelekiswa kwamkelwa kwiiKholeji zaseCalifornia
Indlela yokudibana namaLungu akho eNkqantosi ubuso nobuso
I-Best Kids 'Music yama-1970
Isikhokelo sokusilela abadlali beSlot